Barnaamijka Arduino microcontroller
Is dhexgal Arduino oo leh analoog iyo dareemayaal dhijitaal ah (badhanka riixaya, iftiinka, buuqa, joogitaanka, dareemayaasha cadaadiska, iwm.)
isticmaalka maktabada software (si loo xakameeyo matoorada, saldhigyada iftiinka, codka, iwm.)
Decode Fikradaha wax-ku-taabaynta muhiimka ah ee Fablabs (waxbarashada tusaale ahaan, wax-soo-saar degdeg ah, iwm.)
MOOC-dan waa qaybta labaad ee koorsada Wax-soo-saarka Dijital ah.
Thanks to MOOC-kan, si dhakhso ah ayaad u samayn kartaa barnaamij oo dhis shay is dhexgal ah ka dib markii uu bartay aqoonta aasaasiga ah ee qalabka elektaroonigga ah iyo horumarinta kumbuyuutarka. Waxaad awoodi doontaa inaad barnaamijka arduino, kombuyuutar yar oo loo isticmaalo FabLabs si loo sameeyo walxaha garaadka.
Waxaad la shaqayn doontaa bartayaasha, waxaad kala hadli doontaan khubarada MOOC-gan oo waxaad baran doontaa sida loo noqdo qof dhab ah "gaare"!
Ku barnaamijka shay Arduino Diisambar 19, 2021Tranquillus
READ ANSSI waxay ka digtay ku xadgudubka amniga Log4Shell
horeFurayaasha cilmaaninimada - doorka maamulada maxalliga ah
socdaTaariikhda matalaadda iyo daaweynta waallida